Apple Music nwere ike ikwuputa ihe ngosi banyere ihe nkiri 1983 Prince | Esi m mac
Apple Music nwere ike na-agbasa akụkọ banyere egwu nke Prince 1983
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Egwuregwu Apple, Noticias, ọtụtụ
na-erughị na afọ ndị na-abịanụ, usoro nke ọrụ egwu egwu ga-eduzi n'ụzọ ụfọdụ, na ọrụ nke naanị, ma egwu na ndekọ nwere ike ịtọhapụ. Naanị Apple Music nanị ga-agbasa ozi banyere ihe nkiri nke egwu egwu nke Prince dere na njem nke ngosi nke akwụkwọ akụkọ ya bụ Purple Rain, rụrụ na obodo onye ọbụ abụ n’obodo Minneapolis. O doro anya na akwadoghị ịzụta ikike, dịka Spotify nwekwara ike inwe mmasị.
Ha na-ekwu maka ọnụ ọgụgụ ndị na-enyocha mbara igwe n'ịzụta ikike. Obere ihe oyiyi ahụ, yana ọnwụ nke onye na-ese ihe na nso nso a, na-eme ka ụgwọ ahụ dị oke ọnụ nke kwesiri ka ndi choro iweghara ikike ha. Isi mmalite ndị ọzọ na-egosi na Spotify agaghị adị njikere ịme azụmahịa ahụ. Aga m anọ naanị Troy Carter, Spotify Executive, rue oge ọ bụ onye ndụmọdụ nye ndị nketa nke ikike onye omenkà. Nye ndị na-eso ụzọ Prince nke Minneapolis, ọ bụ egwu na-eme n'akụkọ ifo, ebe ọ bụ egwu egwu na-atụghị anya ya ebe Prince kpọrọ isiokwu a maara nke ọma Purple Rain maka oge mbụ.
Ọbụghị naanị Apple, kamakwa lỌrụ gụgharia egwu kacha mara amara abawanyela katalọgụ ndị isi kamgbe ọ nwụrụ na Febụwarị 2016. Apple na-eme ka anyị bụrụ usoro a site n’oge ruo n’oge. Site na okike nke ọrụ zuru ụwa ọnụ, ọ bụ Taylor Swift onye weputara akwukwo site na njeghari uwa nke ya nke 1989. Ma na nso nso a, o kwuputara ihe ngosi banyere puff Daddy, nke a na-atụ anya ịhapụ June ọzọ.
Apple Music na-anwa imeri nọmba Spotify na omume dịka nke a. Agbanyeghị, ọ na-esiri ike na otu ụbọchị ọ ga-enwe ike ijide onye egwu na-asọ asọ, ebe ọ bụ na uru nke ikpeazụ a bụ multiplatform, nke e mepụtara kemgbe ọ malitere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple Music nwere ike na-agbasa akụkọ banyere egwu nke Prince 1983
Nlekọta Nchọgharị na Livelọ 3D Pro Live, na ere maka obere oge
Otu esi zoo ogwe menu na macOS